Perfect ဖြစ်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီမျိုးရှာနေရင် သင့်ကို ကူညီနိုင်မယ့် အချက် (8) ချက် - Lifestyle Myanmar
Perfect ဖြစ်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီမျိုးရှာနေရင် သင့်ကို ကူညီနိုင်မယ့် အချက် (8) ချက်
ပထမဆုံးသော ဂျင်းဘောင်းဘီကို ၁၈၅၃မှာ Levi Strauss က လယ်သမားတွေအတွက် အလုပ်လုပ်တဲ့ အဝတ်အစားအဖြစ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ လူတိုင်းမှာ အနည်းဆုံးတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီ တစ်ထည်ရှိကြပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးဝတ်ဆင်နေတဲ့ ဒီအဝတ််အစားမှာ ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ပုံစံတစ်မျိုးက သင့်ကို စတိုင်ကျတဲ့ ဖက်ရှင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သလို နောက်ပုံစံတစ်မျိုးက သင့်ကို ကြည့်ရဆိုးအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ချုပ်ရိုးချုပ်သား၊ အိတ်ကပ်၊ အထည်အမျိုးအစား၊ fitting ကျမှုအထိ အရာရာတိုင်းက အရေးပါပါတယ်။
အချို့လူတွေက ဆောင်းရာသီမှာ အထူသား ဂျင်းဘောင်းဘီကို ရွေးချယ်ကြပြီး နွေရာသီမှာဆိုရင် ဂျင်းအပါးသားကို ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ အများသောအားဖြင့် ဂျင်းအပါးတွေက မြန်မြန်ရွဲသွားကြပြီး ကြည့်ရဆိုးသွားကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂျင်းအပါးတွေက ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အားနည်းချက်တွေကိုသာ ဟိုက်လိုက်လုပ်ပြပါတယ်။ ဂျင်းအထူသားကတော့ အချို့ပြဿနာတွေကို ဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဂျင်းဘောင်းဘီကောင်းမှာ ကော်တွန်နဲ့ elastane အနည်းငယ် ပါဝင်ရပါမယ်။ ဒါက အထည်ကို ဆန့်သွားခြင်းကနေ ကူညီပေးပြီး ဝတ်ဆင်ရတာကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်လာစေပါတယ်၊ elastane အတော်များများပါတဲ့ ဂျင်းတွေက legging နဲ့ပိုတူပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော ဂျင်းဘောင်းဘီတွေက စျေးပေါပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုတောင် ကြည့်ရဆိုးစေပါတယ်။
တင်ဒေါက်ဆိုတာက နောက်အိပ်ကပ်တွေရဲ့အထက်မှာ မြင်နိုင်တဲ့ ချုပ်ရိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက တင်ပါး ဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ခြေကနေ တင်ပါးတွေကို အမြင်အာရုံမှာ မြှင့်တင်ဖို့အတွက် angle ဒေါင့်ကြီးတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီမျိုးကို ရွေးပါ။ angle ကသေးလေလေ၊ တင်ပါးပြားတဲ့ပုံ ပိုပေါ်လေဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့အိပ်ကပ်က ဇောက်ပိုနက်ရင် တင်ပါးတွေကို ပိုကြီးမားသယောင် ဖြစ်စေပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်တင်ပါးဆုံရိုးအထက်မှာ အိပ်ကပ်သေးသေးလေးတွေပါတဲ့ ပုံစံမျိုးဆိုရင် သင့်တင်ပါးတွေကို သေးငယ်သယောင်ဖြစ်စေပါတယ်။ အိတ်ကပ်ရဲ့အကျယ်က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အိတ်ကပ်က ပိုကျယ်ပြန်လေလေ၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း ပိုကျယ်ပြန်လာလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီး ဂျင်းဘောင်းဘီအတော်များများက အရှေ့အိပ်ကပ်မရှိကြလို့ ပြဿနာ သိပ်မရှိပါဘူး။
၄။ နောက် အိတ်ကပ်
နောက်အိတ်ကပ်တွေက တင်ပါးတွေကို ဘယ်လိုအသွင်အပြင် ပေါ်လာစေမလဲဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။ ရှည်ပြီး တန်းတဲ့အိတ်ကပ်တွေက တင်ပါးတွေကို ပြားစေပါတယ်။ အိပ်ကပ်က အပေါ်ပိုင်း ကားတဲ့ပုံစံက တင်ပါးကားတဲ့ ပုံပေါက်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဂျင်းဘောင်းဘီကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ သတိထားသင့်ပါတယ်။
တင်ပါးတွေကို အမြင်မှာ သေးအောင် လုပ်ဖို့ဆိုရင် ပုံမှန်ဆိုဒ်အိတ်ကပ်တွေပါတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီမျိုးကို ရွေးချယ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ Push-up (ပင့်တင်) သက်ရောက်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ဆိုရင် အပေါ်ဘက်နည်းနည်းရောက်တဲ့ အိပ်ကပ်သေးသေးပါတာမျိုးကို ရွေးချယ်ပါ။ ဒါ့အပြင် အိတ်ကပ်ရဲ့ angle တွေကြီးတာကလည်း တင်ပါးကို လုံးဝန်းစေပါတယ်။
၅။ Fitting ကျမှု
ခါးလျောတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေက ခြေထောက်တွေကို တိုသယောင် ဖြစ်စေပါတယ်။ ခါးမြင့်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေက ခြေထောက်တွေကို ရှည်လျေားစေပါတယ်။ သို့သော် low-rise jeans တွေက ခန္ဓာကိုယ်တိုပြီး ခြေထောက်ရှည်တဲ့သူတွေနဲ့ဆိုရင် ကြည့်ကောင်းပါသေးတယ်။ ခါးမြင့်ဂျင်းဘာင်းဘီတွေက ဗိုက်သားကို သေးငယ်တဲ့ ပုံပေါ်စေပါတယ်။
ဂျင်းအရောင်ရင့်တွေက အများအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို အရပ်မြင့်စေပြီး ပိန်ပိန်ပါးပါးပုံပေါက်စေပါတယ်။ အရောင်ဖျော့ဖျော့တွေက ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းကို ပိုကြီးထွားစေပြီး ဖိနပ်အရောင်ရင့်နဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ သင့်အား အရပ်ပုသွားစေပါတယ်။ ဂျင်းဖျော့ဖျော့တွေကို ကြိုက်ပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ပိုကြီးတဲ့ ပုံမပေါက်စေချင်ဘူးဆိုရင် အင်္ကျီကို အရောင်ဖျော့တာ ရွေးဝတ်ပါ။
၇။ Decorative elements
Light လိုင်းတွေထည့်ထားတာက သင့်ကို ပိုကြီးသယောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပေါင်နားမှာ ကန့်လန့်လိုင်းတွေထည့်တာက သင့်တင်ပါးဆုံကို ပိုကြီးသယောင်ဖြစ်စေပြီး ဒီဧရိယာကို အာရုံစိုက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပေါင်အလယ်မှာ ဒေါင်လိုက်လိုင်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် ပေါင်တံသွယ်ပြီး ပိန်ပိန်ပါးပါးပုံပေါက်စေပါလိမ့်မယ်။
ဂျင်းဘောင်းဘီအကျပ်ပေါ်က ဘေးချုပ်ရိုးဟာ ခြေထောက်ရဲ့ အလယ်လောက်မှာရှိပြီး တစ်ဖြောင့်တည်း ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချပ်ရိုးက တစ်ဖြောင့်တည်း မဖြစ်ဘူး၊ perfect မဖြစ်ဘူးဆိုရင် ခြေထောက်ဟာ ကောက်နေပုံပေါ်ပြီး ရှိရင်းစွဲထက် ပိုကြီးသယောင် ဖြစ်စေပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် ကြည့်ရလည်း ဆိုးပါတယ်။
Emily in Paris ဆိုတာကတော့ မကြာသေးခင်ကာလက လူငယ်တွေကြားထဲမှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ comedy-drama ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်သူအမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးက ပဲရစ်မြို့ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ရင်း ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို စိတ်အားထက်ထက်သန်သန်နဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံကို ကြည့်ရှုသူတွေစိတ်ခွန်အားတက်ကြွစေမယ့် ပုံစံလေးနဲ့ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။...
Hair Colour တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေမသိသေးသော သမိုင်းကြောင်းများ
သင်ဆံပင်အရောင်ပြောင်းရတာကို သဘောကျပါသလား? ၎င်းက သင့်ကို အသစ်အသစ်သောခံစားချက်တွေကို ခံစားရစေနိုင်သလို သင့်စိတ်ကိုလည်း ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့ စတိုင်လ်အသစ်တစ်မျိုးကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဒီလိုစိတ်ကြိုက်အရောင်တွေပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ဆံပင်အရောင်တွေကို ဘယ်အချိန်က စတင်ပြီးတီထွင်ခဲ့တာလဲ? ခေတ်အဆက်ဆက်က ဆံပင်အရောင်ပြောင်းခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
Konstantin Bogomolov ဆိုသူဟာ လက်ဗီးယားနိုင်ငံရဲ့ အထင်ရှားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ကို ရှာဖွေပေးနေတဲ့ အရည်အချင်းရှိသော Image ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ပါ။ ဘိုဂိုမိုလိုဗ်ဟာ စိတ်ပညာဗဟုသုတကိုသုံးပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့ စရိုက်ကို အခြေခံကာ Image...